Canon Video Converter: Beddelaan Canon MTS M2TS in qaab kasta oo
> Resource > Beddelaan > Sida loo Beddelaan Canon MTS M2TS Files in qaab kasta oo si fudud oo dhaqso
Dad badan oo Canon videos record kaamirada in MTS qaab / M2TS, sida Canon HFS10 / 100/200, Canon HR10, Canon HG10 / 21 iyo wixii la mid ah. Qaab MTS / M2TS adag tahay dadka isticmaala inuu ka ciyaaro, edit, ama wadaagaan. Sidaa darteed, inta badan ka mid ah dadka isticmaala Canon dooran si loogu badalo files Canon MTS / M2TS in qaabab kale oo ka caanka ah sida wmv , AVI, MP4 , FLV iwm Sidaas, ay awoodaan in ay ku ciyaaraan files Canon MTS M2TS meel kasta oo ay doonayaan ama ku haboon yihiin files footage ay la qaybso qoyska ama saaxiibbada.
Maqaalkani waxa uu inta badan diiradda ku saabsan sida loo badalo files Canon M2TS / MTS la Wondershare Video Converter ( Video Converter u Mac ). Waa wax cajiib ah Canon video Converter ah kuu oggolaanaysa in aad loogu badalo aad files Canon in ku dhawaad ​​qaab si deg deg ah, si fudud oo tayo sare leh. Sidoo kale, waxaa si toos ah u bixisaa aad badan oo qaabab filaayo in qalabka ugu caansan sida iPhone iyo codsiyada sida Kan sameeyey Windows Movie, si aad u bedeli karaan faylasha Canon ku haboon barnaamijyadan ugu fiican fudayd.
By habka, waxaad sidoo kale qaar ka mid ah shaqooyinka tafatirka qabow si toos ah u samayn kartaa in this Converter Canon MTS haddii aad rabto in aad wax ka bedel files Canon MTS / M2TS. Habkaani waa mid wax tar leh gaar ahaan marka aad beddelid files kaliya degida in qaar ka mid ah video editor u tafatirka, maxaa yeelay, waxay si weyn u badbaadin doonta waqti aad.
Next, waxaan ku bari doonaa sida si loogu badalo files Canon MTS / M2TS si faahfaahsan aad. Ka hor inta aan sidaa yeelno, aad leedahay si ay u gudbiyaan files MTS / M2TS ka fiidiyo Canon si aad u computer.
1 dar Canon MTS / M2TS videos
Si aad u dajiyaan aad files MTS / M2TS deegaanka si ay app this diinta, waxaad riixi kartaa "Add Files" icon xitaa your computer dooro faylasha aad rabto. Haddii kale, waxaad isku dayi kartaa hab kale si ay u dajiyaan faylasha aad. Taasi micnaheedu waa in si fudud jiidi oo hoos u faylasha Canon MTS / M2TS ka PC barnaamijkan.
Fiiro gaar ah: Haddii loo baahdo, waxa aad awoodi kartaa in aad bedesho magacaaga file, dib-u-diyaarin amarka, guji thumbnails video in ay ku eegaan videos keeno, xitaa midowdo oo dhan videos galay mid ka mid file.
Si loogu badalo files Canon MTS / M2TS in qaab qaar ka mid ah, waxaad dooran kartaa qaabka aad rabto in liiska qaabka wax soo saarka this app ee. Laakiin haddii aad rabto in aad si loogu badalo files Canon for loo maqli karo qalabka qaar ka mid ah, waxaad si toos ah u dooran kartaa qalabka sida qaab wax soo saarka. Qaabka filaayo in wax soo saarka ee qalabka gabi ahaanba ku haboon doonaa qalab aad ugu wanaagsan.
Si arbushin ilaa ay liiska qaabka wax soo saarka, riix qaab icon ee "Qaabka Output" Murayaad. Next, waxaad u tagi kartaa "Qaabka" tab> "Video" category in ay doortaan qaab aad dhab ahaan doonayaan. Ama riix "Device" tab si aad u hesho qaybta oo qalab aad iska leh, ka dibna dooro qalab gaar ah.
App Tani kulmi kartaa shuruudaha video tafatirka aasaasiga ah, waxaad dhahdaa, jar, dalagga, shaandheyn videos, iyo dar vdieo saamaynta, subtitles iwm bar video shayga, kaliya aad u fudud riix "Edit" doorasho ka dibna waxa aad heli kartaa kala duwan video tafatirka qalabka. Just bilaabaan mashruuca tafatirka aad hadda!
4 bilow diinta files Canon MTS / M2TS
Beddelaan aad files Canon adigoo riixaya "Beddelaan" button rukun ee hoose-saxda ah ee suuqa kala barnaamijkan. Isla markiiba, waxaad ka arki kartaa ulaha gudban oo qoyan oo aan idin tusiyo hawlaha qaab beddelidda. Marka lagu sameeyey, waxaa jiri doona qoraal ah oo aad wargelinta. Markaas, waxaad riixi kartaa fursad u Folder Open si ay u helaan wax soo saarka, kuwaas oo files.
Just si xor ah u ciyaaro, xaalkaa ama wadaagno Canon MTS / M2TS video files hadda!
Beddelaan Panasonic MTS M2TS Files in qaab kasta oo : Just la qasabno yar oo sahlan, oo aad si qaab kasta oo aad rabto in video tayo aad u sare loogu badalo kartaa files Panasonic.
Beddelaan MTS in DVD si fudud oo dhaqso : Raac hagahan si ay u gubaan MTS DVD on PC iyo Mac haboon labada (Windows 10 ka mid ah).
Sida loo Encode wmv Faylal ay la wmv Encoder